Daawo Muqaal:Qisadii tuugii Sheekha caanka ah noqday,Waxa soo jeedinaaya Sheekh Siciid Cali Axmed ..11.08.17 : Salaan Media
Daawo Muqaal:Qisadii tuugii Sheekha caanka ah noqday,Waxa soo jeedinaaya Sheekh Siciid Cali Axmed ..11.08.17
Qisada aan maanta idinla wadaagayaa waa qiso rajo galinayasa qof kasta. Quraanku waxa uu Allah inoogu sheegay si kasta oo uu qofku u qaldamo iyo danbi kasta oo uu sameeyo in aan naxariista Allah laga quusan. Sheekadani waa qisadii nin tuuug budhcad ah ahaa oo markii uu khaldaadkiisii ka toobada keenay noqday sheekh caalin caan ah. Qisadaas iyo cibrooyinka ku jira halkan ka daawo fadlana la sii wadaag inta aad jeceshahay..waxa laga yaabaa in Alllah ku anfaco ee.
« Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo amray howlgalkii lagu dilay guddoomiyihii Al-Shabaab ugu magacawnaa Muqdisho.11.08.17
Warmurtiyeed ka soo baxay odayaasha guurtida jaalliyadaha reer Somaliland Ingiriiska kuna wajahan arrinta murugada leh ee ka muuqatay golaha wakiillada jamhuuriydda Somaliland. »